Madaxweynahaa La Beddelayaa; Ma Dood Shaqaynaysaa? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweynahaa La Beddelayaa; Ma Dood Shaqaynaysaa?
Jigjiga (JigjigaOnline) – Maalmihii ugu dambeeyey, siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Dawladda Deegaanka Soomaalida, ayaa baraha bulshada ku daabacayey, farriimo gaagaaban oo ay ku sheegayeen in Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar xilka laga qaadayo, arrintaasina tahay mid kasoo dhamaatay xafiiska Ra’iisal wasaaraha dalka.
Xogtan oo iyaga uun ku kooban, may soo raaciyaan waxyaabaha qanciyey Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed ee uu u cuskan karo, in xilka laga qaado Madaxweyne Mustafe oo muddo sannad ah xafiiska fadhiyey.
Waa la ogyahay, wayna tahay in deegaanka ay joogaan dad badan oo han siyaasadeed leh, doonayana inay madax ka noqdaan deegaanka, laakiin dariiqa ay u marayaan uu yahay mid habow ah oo meel cidlo ah dhigi doona.
Deegaanka wax aka jirta hal xisbi oo kaliya oo diiwaangashan, mana jiraan ururro amaba xisbiyo kale oo illaa hadda lagu daray liiska axsaabta ku tartami doonta doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona sannadka dambe. Halkii ay siyaasiyiintu isku habayn lahaayeen qaab xisbiyo amaba ururro oo ay isku dayi lahaayeen inay buuxiyaan shuruudaha Komishanka Doorashooyinka Itoobiya ku xidhay axsaabta cusub, waxay taas beddelkeeda door bideen inay fadhiga ku raadiyaan kursi.
Siyaasiga waxa laga doonayaa inuu noqdo mid aragti fog, saadaalin kara mustaqbalka dhow iyo ka fog, ugu dambayna sababayn kara haddii ay wax qaldamaan sida ay wax u qalloocdeen. Waxa intaas dheer, in siyaasigu ahaado mid bulshadiisa ku dhex jira oo ka madhan qabyaalad iyo cunfi, isla markaana leh aragti siyaasi ah oo uu bulshada kaga dhex heli karo taageerayaal.
Qof kasta oo kursiga ku fadhiista, muddada uu Allah u qoray ayuu fadhiyayaa, laakiin, siyaasiga doonaya inuu booskaas soo fadhiisto, waxa habboon inuu dood lagu qanci karo fagaaraha la yimaaddo.
Dhinaca orodoska guud ee siyaasadda dalka, waqtigan suurtogal maaha, in Addis Ababa ay u badheedho inay farageliso maamullada dalka, sababtuna waa in kacdoono ay ka jiraan gobollada qaarkood. Arrinta gaarka ah ee Deegaanka Soomaalida bad-qabka siyaasadeed siinaysaa, waa nabadgelyada iyo xasilloonida sannad jirsatay ee shacabku dareemay iyo xorriyatul qawlka hana-qaaday, inkasta oo ay dadka qaarkood su’aalo ka keeni karaan.
Halka ay doodda ugu badan ka jirto oo ah ladagaallanka musuqmaasuqa oo ah doodda ugu weyn ee mucaaradka, wali ma jirto caddaymo buuxa oo bannaanka ay cidi keentay, sidoo kalena, waxa uu Madaxweynuhu fagaareyaasha ka sheegay tiroba dhawr jeer, in uu si adag ula dagaallamayo.
Haddaba maxaa la gudboon mucaaradka:
Inay samaystraan ururro/xisbiyo siyaasadeed oo ay kasoo fuuli karaan sallaanka ugu sarreeya ee ay ku hamiyayaan.
In shacabka dhexdooda ay yimaaddaan oo ay dood qancin karta soo hordhigaan, si ay doorashooyinka natiijooyin uga keeni karaan.
In Musuqmaasuqa ay usoo raadiyaan caddaymo dadka u cuntama.
Dhallinyarada DDS Oo Ku Baaqday in 72 Saacadood Aan Lagu Safrin Ethiopian Airlines